Daalụ, Maazị Ọrụ | Martech Zone
Ọchịchọ m Apple malitere mgbe enyi m Bill Dawson na nwunye ya, Carla Ybarra-Dawson zụtara m AppleTV otu afọ. Nke ahụ bụ mbido… ugbu a ụmụaka m nwere MacBook Pros na iPhones, ọfịs m juputara na Ngosipụta Cinema, iPads, AppleTV ọzọ, iMac na Mac Mini Server. Kwụsịtụ n'ọfịs anyị oge ụfọdụ wee lelee ya.
Ọtụtụ ndị enyi m bụ ndị mere m ihe ọchị nwere Apple… gụnyere Doug Theis, Adam Small, na Jenni Edwards. Agaghị m agwa ha banyere ya. N'ezie, ọtụtụ mgbe, m ga-agbachitere ụgwọ a gbakwunyere. Ọ bụ n'ihi na ọ bụghị maka Apple Cult ma ọ bụ na-achọ ịdị jụụ ma ọ bụ na-emegide Microsoft (Microsoft na-amasị m!) ghara imebi.
Ihe Steve Jobs mere na Apple gbochiri m ile komputa anya dika ngwa oru wee bido ime ka m chee ya dika ihe ncha iji mee akara m n’uwa.
Amaara m na nke ahụ na-ada hokey, mana mmụọ nsọ ahụ dị. Ka m na-etolite n’ahịa m, amụtara m na oge ọ bụla m mere nkwenye, ọ dị ka ịkụ aka mgbawa na ọrụ nka. N’ikpeazụ, ụlọ ọrụ ahụ ga-adị ka ụfọdụ eti eti, ihe ochie, ọnụ ala ihe adịghị mma. Achọghị m ka ụlọ ọrụ m dịrị ka nke a. Ya mere, anaghị m ekwenye. Efuola m ụfọdụ ndị enyi n’ihi ya. Etufuola m onye m na-arụrụ ego. Etufuola m ụfọdụ ndị ahịa ya. A na m atụ uche ha niile… mana amam na m na eme ihe kwesiri. Azụmaahịa m na-aga n'ihu na-agbawa ma na-adọta ndị ahịa buru ibu ma ka mma. Enwere m ndị enyi na-arapara n'ahụ m site na ya. Enwere m ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-anọgide na-anagide m;). Anyị niile maara na anyị na-aga n'ụzọ ziri ezi.
Na mpụga nke atụmatụ nke akụrụngwa ya na ngwanrọ ya, akụkọ ọ bụla m gụrụ banyere Maazị Ọrụ bụ na ọ gaghị emebi iwu ọ bụla. Ekwesiri ime ihe niile kariri nke oma, nke pere mpe, obere ikpori…. Ọtụtụ ndị nọ ya nso na-ekwu na ọ bụ ụfụ na ọ ga - arụ ọrụ… mana ha agaghị azụ ahịa ihe ọ bụla maka ya.
Enweghị m ọhụụ ọ bụla DK New Media ịbụ Apple na-esote, mana ọbụlagodi na obere netwọkụ nke ndị enyi m, ndị na - agụ akwụkwọ, na ndị ọrụ ibe m, enwere m olile anya na m nwere ike ime ka ha chee ihe dị obere karịa ndị ọzọ.
Daalụ, Maazị Ọrụ.
Tags: apụlapụlvụgwọ dawsonọnwụ nke ọrụ ọrụarụ ọrụsteve ọrụ ọnwụ
Ọkt 5, 2011 na 9:14 PM
Ezi kwuru bro. Amen na Chukwu gbaa Steve ọsọ ọsọ.
Ọkt 5, 2011 na 9:22 PM
N'adịghị ka ihe ọtụtụ ndị nwere ike iche n'echiche m, enwere m ekele maka Apple na ngwaahịa ya. Dịka i kwuru, ihe na-adịghị m mma bụ ka ndị na-agba ọfụma-Kool-aid-a-a drinkingụ-ọfụma-dị ka ọtụtụ ndị Fans ya. M na-ekwenye kpamkpam na ihe ọhụrụ, ihe okike na mmụọ nke Steve Jobs nwere ike ịbụ ihe mkpali maka ụzọ dị iche iche dị iche iche. Agaghị ahụ ya.